Google I / O 2019: Ozi nzuzo niile ewepụtara | Androidsis
Ngbanwe nzuzo niile egosiri na Google I / O 2019
Edere Ferreno | | Noticias, Nche
Nzuzo abụwo otu n'ime isiokwu ndị dị na Google I / O 2019 a. Ugbua tupu ihe omume ahụ enwere asịrị banyere mgbanwe dị iche iche ụlọ ọrụ ahụ ga-ewebata na nke a, mana ha enyela anyị ozi ọma nke na-abịakwute ndị ọrụ gam akporo na nke a. Companylọ ọrụ ahụ na-ewere nzuzo karịa nke ọma, opekata mpe mmetụta a na-enye.
Na-esote ngosi nke ekwentị ọhụrụ ha ma ọ bụ beta ọhụrụ nke gam akporo Q, Enweela oghere iji kwurịta atụmatụ nzuzo ọhụrụ a ga-eweputa oru na ọnwa ndị a, ọ bụ ezie na ụfọdụ n'ime mgbanwe ndị a nwere ike ịbịa na gam akporo Q.
1 Mfe njikwa na otu-aka Google akaụntụ ohere
2 Ọnọdụ incognito
3 Ehichapụ data akpaaka na njikwa onye ọrụ
Mfe njikwa na otu-aka Google akaụntụ ohere
Iji hụ na njikwa nzuzo na -adị mgbe niile na mkpịsị aka gị, anyị na -eme ka ịnweta akaụntụ Google gị dị mfe site na iji otu mgbata na ngwaahịa Google niile dị mkpa. # io19 pic.twitter.com/yEniCV5JUk
- Gugul (@Google) Nwere ike 7, 2019
Google na-achọ ịnweta ohere na akaụntụ ahụ, na mgbakwunye na ntọala nzuzo, dị mfe ma dị mfe karị. Maka nke a, ọ ga - enyere anyị aka ijikwa nke a site na iji ọrụ rụọ ọrụ. Tụkwasị na nke ahụ, a na-abanye ụzọ mkpirisi n'ụzọ dabara adaba. Ebe ọ bụ na ị ga-enwe naanị pịa na foto profaịlụ onye ọrụ nke mere na nhazi ihe ngosi na-egosi, n'etiti onye nhọrọ ya ga-abụ nke nzuzo.
Ndị ọkụ na-enye anyị ohere ikpebi ụdị ọrụ a na-edekọ na nke a na-edebeghị. Ọ bụ ezie na a na-eji ha eme ihe ugbu a karịa mee ka ọ dịkwuo mfe maka ndị ọrụ. Echiche bụ na njikwa ụdị ọrụ a dị mfe maka ndị ọrụ gam akporo. Na mgbakwunye, site na ịpị foto profaịlụ anyị ga-enwekwa ozi gbasara mgbe anyị abanyela na akaụntụ ahụ ma ọ bụ na ngwa a kwuru.
Na-abịa n'oge na-adịghị @googlemaps, mgbe ị gbanyere ọnọdụ incognito na Maps, a gaghị echekwa ọrụ gị - dị ka ebe ịchọ ma ọ bụ nweta ntụzịaka na akaụntụ Google gị. Pịa na foto profaịlụ gị ka ịgbanwuo ya ma ọ bụ gbanyụọ ya ngwa ngwa. # io19 pic.twitter.com/z7GRkkmDbn
Cokpụrụ incognito bụ ọrụ anyị nwere na Google Chrome, na mgbakwunye na YouTube, ebe onye mmalite ya dị mfe. Ugbu a, ọnọdụ a na-aga n'ihu na-agbasa n'etiti ngwa azụmahịa. Ebe ọ bụ na a mara ọkwa na Google Maps ga-enwe ọnọdụ incognito n'oge na-adịghị anya. Ekwenyela na ọ ga-abụ na ọnwa ole na ole, ikekwe mgbe oge ọkọchị gasịrị, na ọrụ a ga-adịrịrị na ngwa igodo.
N'ụzọ dị otú a, anyị ga-enwe ike iji ngwa ahụ na-enweghị data anyị ọ bụla echekwara n'oge ahụ. Echiche bụ na ọchụchọ ị na-eme, maka adreesị ma ọ bụ saịtị, ma ọ bụ ọ bụrụ na ị na-eji ya ka ịnyagharịa n'etiti ebe dị iche iche, ejikọghị data a na akaụntụ gị. Yabụ na ọ bụ ịnyagharịa mana iji nzuzo karịa n'echiche a.
Ọzọkwa, ekwenyela na kwa injin nyocha, Google Search, ga-enwe ọnọdụ incognito a obere oge. Ọ bụ otu n'ime ọrụ kpakpando nke ụlọ ọrụ na Google I / O 2019 a, nke ha na-achọ ịkwalite dị ka nhọrọ kachasị mma n'ihe banyere nzuzo.
Ehichapụ data akpaaka na njikwa onye ọrụ
N'ikpeazụ, otu atụmatụ nke abanyego tupu mmalite nke Google I / O 2019, ma gosipụta ya na ihe omume ahụ. Ikekwe otu n'ime ọrụ ndị a rịọrọ maka usoro nzuzo nke ndị ọrụ. Ebe ọ bụ na ụlọ ọrụ ahụ ga-enye ndị ọrụ ohere nke ihichapụ ọrụ anyị na-akpaghị aka na akaụntụ. Ọ ga-ekwe omume ịtọlite ​​oge nke ọnwa 3 ma ọ bụ 18, nke data a ga-adị na sava Google.
Mgbe oge ahụ gafere, a ga-ehichapụ data ahụ, nke gụnyere ọrụ na akụkọ ihe mere eme ebe. Anyị agaghị eme ihe ọ bụla na nke a. Na mgbakwunye, ekwuru na ha na-arụ ọrụ na-eme gam akporo Q ka ọ bụrụ ikpo okwu siri ike, nke ga-ebute ụzọ nke nghọta na cOnye ọrụ na-achịkwa data ha.
A na-atụ anya ihe niile atụmatụ nzuzo ndị a bụ eziokwu na mwepụta nke gam akporo Q. Ya mere, anyị ka ga-echere oge ruo mgbe ha ga-ewepụta onwe ha wee kụọ ekwentị. Mana anyị na-ahụ nnukwu ọganihu ụlọ ọrụ na ngalaba a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Nkuzi » Nche » Ngbanwe nzuzo niile egosiri na Google I / O 2019
Ekwentị 10 kachasị ike nke Eprel 2019, Dabere na AnTuTu